Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in MP4 sida dhaqsaha badan ee Mac / Win (Win 8 ka mid ah)
Somtimes aad ka heli kartaa in MOV videos aad laguma ciyaari karo on Blackberry, PDA, casriga ah ama PSP. Xitaa files MOV qaar ka mid ah oo kaliya laguma ciyaari karo aad QuickTime, ama waxaa jira kaliya dhawaaqa laakiin sawir lahayn. Si kastaba ha ahaatee, MP4 waa qaabab video ugu caansan ee telefoonada, kiniiniga, iyo qalab kale. Waxaad isticmaali kartaa diinta qalab video ah si loogu badalo MOV in MP4 . Markaas waxaad lacag la'aan ah karo raaxo files QuickTime MOV meel kasta iyo waqti kasta.
Qeybta 1: Best MOV QuickTime in MP4 Video Converter
Qeybta 2: Free QuickTime Converter
Qeybta 3: Online QuickTime MOV Converter
Qeybta 4: Knowlege Extended u MOV iyo MP4
Beddelaan in 158 qaabab, sida AVI, MKV, MOV, MP4 , iwm
Beddelaan inay horena filaayo in muddo ku dhow oo dhan oo ah qalabka.
30X xawaaraha diinta ka dhaqso badan wax converters convensional.
Keen metadata aad filimada Lugood si toos ah.
OS taageerayaan: Windows 8/7 / XP / Vista, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Download Free iyo rakibi Converter MOV QuickTime ( Video Converter u Mac ). Waxa aad qaadataa afar kaliya tallaabooyin si loogu badalo QuickTime MOV in MP4, ama si loogu badalo MP4 in QuickTime MOV. Article hoose ayaa ku siin doona tutorial ah tallaabo-tallaabo ay version Windows.
Tallaabada 1 dar files si MOV QuickTime ka Converter
Burcad Converter video ka dibna riix dar Faylal ay si ku darto files aad rabto in aad si loogu badalo. Waxaad ku dari kartaa dhowr files in mid ka mid ah go sida Converter ka taageertaa diinta Dufcaddii.
Tallaabada 2 Video ayeey (Ikhtiyaar)
Dooro video aad rabto in aad wax ka bedel iyo ku dhuftay Edit button on video ah laga keeno. Tani MOV in Converter MP4 siinayaa lafdheerta, lana siii, biirtay iyo hawlaha kale. Ka dib markii sixiddiisa video ah, waxaad heli kartaa Falanqeynta degdeg ah ee aad video saxar ah. Just ciyaari talanti si aad u masterpiece video ah.
Tallaabada 3 Output Qaabka Goobta
Riix badhanka arrow hoos ag button Qaabka wax soo saarka. Ka dibna ku dhufatey Qaabka icon dhinaca midig ee interface ugu weyn iyo MP4 xulo sida qaabab wax soo saarka ah. Ka dib markii in, kartaa adiga (ama optionally) qeexo profile wax soo saarka adigoo riixaya Settings button.
Sidoo kale codsigan ayaa horena la filaayo in qalabka kala duwan ama qalabka video tafatir sida iMovie ama Pro Goo Final. Waxaad riix kartaa Device tab si aad u dooratid qalabka sida qaab wax soo saarka.
Tallaabada 4 Start QuickTime MOV in MP4 Conversion hadda
Hit ka badalo button marka wax walba ayaa la filayaa iyo wadahadallo toos ah la dhamaystiri doono. Hadda waxaad leedahay in la sameeyo oo dhan waa in ay sugaan oo ka dhacay Open Finder si ay ugu raaxaystaan ​​videos ah!
Dhab ahaantii, video this MOV in MP4 video Converter u Win (Windows 8 taageeray) ku dhowaad dhammaan oo ka mid ah qaabab multimedia caan ah oo loogu badalo kartaa tallaabooyinka kor ku xusan. Free download ee software oo ay daawadaan tutorial video hoose.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo MOV QuickTime in ay MP4 Video Converter on Windows
Qeybta 2: QuickTime MOV Free in MP4 Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare Free QuickTime MOV in Converter MP4
Waxaad isticmaali kartaa software si loogu badalo caadi videos si fudud. Sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi YouTube videos, iyo shakhsiyeeyo aad video la dhisay-in editor video.
Pro: Free, diinta caadi videos
1. Waxay leedahay qaab xaddidaadda in 3D ama HD videos ah. Sidoo kale waxa aan u bedeli karaan qalabka.
2. Xawaaraha Conversion waa mid gaabis ah.
3. DVD looma shido in la taageeray.
4. Waxaad kaliya u isticmaali karaan si ay u soo bixi YouTube videos.
Qeybta 3: Online QuickTime MOV in MP4 Converter
Qeybta 4: Knowlege Extended u MOV iyo MP4 Qaabka
MOV waa kordhin filename qaab QuickTime file multimedia ah. Waxay awood u isku-dar ah noocyada kala duwan ee xogta multimedia (video, audio iyo qoraalka). MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in uu kaydiyo video, audio ah, iyo dukaamada subtitles data.Since sida Lugood isticmaalaa qaab weel tan, oo loo isticmaalo la iPod iyo Playstation (PSP). Waxa uu noqdo qaab caan ah.
Apple Inc Guuritaanka Picture Khubarada Group
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file MOV ah
Sida loo Guba QuickTime MOV in DVD
Sida loo dhoofiyo iMovie in Video
Sida loo cadaadin files MOV
Sida loo Beddelaan QuickTime (MOV) in Windows Media Player Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file MP4 ah
Sidee ku cadaadisaa MOV Files (Quicktime) ee Mac / Win
MP4 in Windows Movie sameeyey, Sidee Waxaad dajiyaan karaa MP4 in WMM
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in MP4 sida dhaqsaha badan ee Win / Mac (Yosemite ka mid ah)